Furriinkii lagu Farxay! (Qaybtii 1aad) | Doodwadaag waa Danwadaag.
Hadda ka hor waxaa is guursaday oday la dhihi jiray ” Nacayb” iyo islaan lagu magacaabi jiray ” Jaceyl.” guurkooda wuxuu ahaa mid ku dhisan jaceyl iyo naceyb wada socda. Muddadii labaatanka sanno ahayd ee ay is qabeen, waxay isku dhaleen labo wiil iyo labo gabdhood. Magacyada wiilasha loo bixiyay waxay kala yihiin “Caafimaad iyo Cudur” halka labada gabdhoodna lagu kala magacaabo ” Caqli Iyo Cabsi”.
Waxay hadba sheekadooda soo jiitanto, odaygii Nacayb ahaa iyo duqdiisii Jaceyl waxay garowsadeen in guurkooda uusan sii shaqeyn karin mar haddii xiriirkoodii uu dhaafi kari waayay jaceyl iyo naceyb wada socda. Waxay si gobannimo leh ugu heeshiiyeen in ay is furaan ka dibna faataxada isku soo maraan. Maxaad ku taqaan naceyb iyo jaceyl furriin ku heeshiiyay. Mar alla markii la is furay ayaa buuq lama filaan ah billowday. Waxaa la isku qabsaday afartii caruur ee la isku dhalay labaatankii sano ee qub iyo qacda la isku qabay.
Rabiga wuxuu aqbalay ducada caanka ah ee tiraahda “Illaahow Tol la’aan Ha na Dhigin” Isla markiiba waxaa buuqii islaanta iyo odayga soo dhex galay tolka. Muran iyo is jiid-jiid badan ka dib, waxaa la go’aamiyay in caruurta si siman loo qaybsado. Midkiiba waa in uu wiil iyo gabar qaataa, sidaas ayay odayaashii tolka guddoomiyeen. Odaygii Naceyb ahaa wuxuu ku dhegay curadkii reerka oo markaas ahaa labaatan jir lixaad iyo lafba u dhasey. Reerka waa tii uu ku curtay wiillka lagu magacaabo ” Cudur.” Odayga doorashadiisa wiilka ” Cudur” ah siyaasad buu ka lahaa ee ubad danayn kamaysan ahayn. Wuxuu rabey inuu geela ku raacsado maadaama uu gacan iyo ciidanba u baahnaa. Inkastoo labadiisa gabdhood uusan kala jeclayn, haddana wuxuu doorbiday in inanta ” Cabsi” dhankiisa soo marto waayo wuxuu ogaa in islaanta iyo gabadhu aysan isla keeni doonin sheekada.
Sidaa daraadeed, duqdii la furay waxaa u soo harey kuraygii “Caafimaad” ahaa iyo gabadhii reerka ugu yarayd ee “Caqli.” Waa tii lagu maahmaahay naag la furay fadhi uma yaal, Islaantii Jaceyl waxay go’aansatay in deegaan kale ay ku soo garoobayso, wiilka iyo gabadha loo ogolaadayna horay u sii kaxeysato. Waxay u wareegtay tuulada mustaqbalka noqon doonta caasimadda Soomaaliya oo loogu sheegay in ay joogaan rag rabbi iyo rasuulba yaqaan, garoobadana u roon! Dhulka maba aysan dhicin. Markii ay maalmo tuuladii joogtay waxaa ka helay oday caan ah oo deegaanka aad looga qaddariyo. Odaygan islaanta garoobta ah calmaday waxaa magaciisa la dhahaa ” Naxariis.” Maxaad ku taqaan Jaceyl iyo Naxariis wada haasaaway. La iskuma daahin, aqal galkoodii ayaaba horay ka dhacey.
Wuxuu noqday guur lagu barwaaqoobay. Duqdii Jaceyl la dhihi jiray si fiican ayay uga nafistay buuqii iyo bullaankii joogtada ahaa waqtigii ay afada u ahayd odaygii Nacayb ahaa. Waxaa booskii oday Nacayb u badalay saygeeda cusub ee ” Naxariis” oo aad moodo in uu jaamacad uga soo baxay sida garoobbada looga farxiyo. Inkastoo aysan ubad isku dhalin, balse Inta cimrigooda ka dhinnayd ayay wada qaateen. Waxay si fiican u koriyeen wiilkii Caafimaad ahaa iyo gabadhii Caqli oo noqday wiil iyo gabar isku kalsoon oo dhexda u xirta sidii looga dabbaalan lahaa dhacdooyinka nolosha.
Gabadha Caqli, kalsoonida waxaa u dheeraa garasho fog iyo geesinnimo aan lala gabbanin. Tusaale ahaan hadda ka hor waxaa dhacday in dood adag ay la gashey naago inkaar qaba oo cirka laga soo halgaaday. Waxay ahaayeen hablo damacsanaa in ay sasabaan qof dumar ah oo ka soo carootay ninkeeda. Caqli waxay maqashey naagihii oo u caqli celinaya yartii ka soo carootay wiilkii qabey. Markii ay dhegaheeda ku soo dhaceen naagihii oo leh” Ninkaada ku noqo, haddii kale malaa’igta ayaa caro darteed ku lacnadi doonta” ayay Caqli is hayn kari waysay oo sheekadii dalaq soo tiri. Waxay naagihii u sheegtay in gabadha aysan juujuubin marka hore, marka xigta aysan maangal ahayn in malaa’igta iskaga xanaaqaan ama lacnadaan gabar danaheeda u carootay.
Dooddaas caatada ah ka dib, Caqli waxay go’aansatay in ay qorto buug loogu magac daray ” Furriinkii lagu Farxay” kaas oo ay uga sheekanayso guushii laga gaarey kala taggii hooyadeed- Jaceyl iyo aabbaheed Nacayb. Ujeeddada ugu weyn ee ay ka leedahay qoritaanka buuggan ayaa ah in ay ku dhiiro galiso furriin hablaha iyo hooyooyinka aan ku faraxsanayn guurkooda. Mar la weydiiyay maangal-nimada qoraalka buug noocan ah, waxay Caqli ku dooday in fulaynimo ka weyn aysan jirin in dumarka loogu cago jugleeyo ama lagu cabsi galiyo malaa’ig samada sare dhibyaraan rabbigooda ku caabudaya!